Aetcfonker — Steemit
မှဘာသာရပ်အဖြစ် Kik မှ preallocated လိမ့်မည်။ Kik ရဲ့ 30 ရာခိုင်နှုန်းကို pre-ခွဲဝေ 10quarters အဘို့, လေးပုံတစ်ပုံနှုန်း 10 ရာခိုင်နှုန်းမှာ Kik ဖို့သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်။ ကျန်ရှိနေသေးသောခြောက်လထရီလီယံပေါက်ဘော်တို့သည် Kin အင်ဂျင် schema
အရင်းအမြစ် ICO အခမဲ့ Institutional ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသုံးရက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန် $ 50 သန်း ပြည်သူ့ရောင်းချခြင်း: ကနေဒါဖယ်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံတွေ, 168.732 ETH (အကြောင်းကို $ 50 သန်း၏ရောင်းအား), ပါဝင် 10 026 117 အကောင့်အသစ်များ၏ ငွေကြေးမူဝါဒက
Kin ကိန်း (Kin) ကို IM application ကို Kick (Kik) ကွင်းဆက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပိတ်ပင်တားဆီးမှုပုံဖြစ်ပါသည် Balhaengryang: 10.000.000.000.000 Kin (10 များထဲမှထရီလီယံ), ထောက်ပံ့ရေး: 756.097.560.976 Kin (7561 ဘီလီယံ) 9800 ထပ်မံတွေ့ရှိရကြောင်းတသောင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2017 မှတဆငျ့ ICO (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဝမ် 1,040 ဘီလီယံ) ကြီးပြင်း စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို 3D ဂိမ်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတပလက်ဖောင်း, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့်အတူလက်တွဲထုတ်ပြန်ကြေညာ အဆိုပါဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းပဲပထမဦးဆုံး Kin တစ်ခုဂေဟစနစ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်ခြေလှမ်း, ပြီးတော့မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်,
သို့သော်သင်နေတုန်းပဲပွင့်လင်းသူကအနာဂတ်၌ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု "မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်င်း၏ဝင်ငွေသုံးစွဲဖို့တကယ်အဆင်ပြေအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်နာယက app ကို" ကိုရှာသောဖြစ်ခဲ့သည်နိုင်ပါတယ် ဒါဟာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အရင်းအမြစ်အတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည် အသုံးပြုသူများအကြားလွှဲပြောင်းကျော်လွန်ပြီးတစ်ပီဇာအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှု၏တစ်ဦးထက်ပိုမူရင်းပစ်မှတ်ပရီမီယံအကြောင်းအရာဝယ်ယူမှုအနေဖြင့် Kin Kin လက္ခဏာသက်သေလက္ခဏာသက်သေအရာအားလုံးမှတဆင့်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
3000000000000 တိုကင်: Kin ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင် (10% အားဖြင့် 10 ရပ်ကွက်အဘို့အသီးအသီးလေးပုံတစ်ပုံတစ်လျှောက်လုံးသော့ဖွင့်) အားခွဲဝေ။310% ဝါဂွမ်းဂဏန်းကွက် 300 ဘီလီယံကိုခွဲဝေတိုကင်လက်ရှိပေးဝေရေးနှင့်ခွေး 756100000000 နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏသည်လေးပုံတစ်ပုံလည်းမရှိ 6000000000000 တိုကင်: Kin ဖောင်ဒေးရှင်းမှ နောက်ထပ်သုံးထရီလီယံပေါက်ဘော်တော်ကိုစတင်တည်ထောင်သူကတော့ Kin ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးရေရှည်အင်္ကျီအချိန်ဇယားကို
3ချီးနှင့်, Kin ဂေဟစနစ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်များ၏စစ်ဆင်ရေးရန်ပုံငွေမဟာဗျူဟာကိုသုံးအောက်မှာသော့ခတ်ခြင်း, Kin ဖောင်ဒေးရှင်းမှ၏ကြည့်ရှုမှုအောက်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Kin Engine ကိုတနှစ်လျှင်နှင့်အစဉ်ပိုင်ကျန်ရှိသော 20 ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်မှုနှုန်းမှာအချိန်ကျော်ပေးဝေရေး၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည်ချီး။ 4
စည်းလုံးညီညွတ်ရေး developer များအဘို့ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရန်ပလက်ဖောင်းပေးဘို့အကျော်ကြားဖြစ်သောစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးဂိမ်းအင်ဂျင်, ပိုများသော 2017 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိမိုဘိုင်းဂိမ်း၏ထက်ဝက်ထက်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် ဖလားခေါင်းကိုနှင့်စသည်တို့ကို Pokemon, Kerbal အာကာသအစီအစဉ်: တစ်ဦးကဂိမ်းစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို အသုံးပြု. ဖန်တီး ဂိမ်း developer များဟာကစား Kindle SDKKin ဂိမ်း SDK ကို, ဆော့ဝဲဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိရိယာအစုံသုံးပြီး Kindle
ပလက်ဖောင်းဂိမ်းသို့ features တွေထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် ကိန်းရည်ရွယ်ချက်ကိုစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. မိုဘိုင်းဂိမ်းစျေးကွက်ဖမ်းပြီးရန်ဖြစ်ပါသည် သင် SDK ကိုနှငျ့အဘယျသို့ပွုနိုငျ အဆိုပါ SDK ကိုအဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှု Store ကအရင်းအမြစ်ကိုဖွင့်ဖို့အောက်ပါကြမ်းတမ်း beta ကိုအဆင့်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်, က github အတွက်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ် ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းသို့မဟုတ်အဆင့် Up ကိုမဟာဗျူဟာကိုမည်သို့အဖြစ်, သတင်းအချက်အလက်မျှဝေသူဆုချမယ့်စနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားမည်အကြောင်း, အားနည်းချက်များကိုသတင်းပို့ကူညီဖို့သို့မဟုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူအသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ဂိမ်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တစ်အသုံးဝင်သောအကဲဖြတ် Leave က်ဘ်ဆိုက်များ စိတ်အားထက်သန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Kindle အဖြူရောင်စက္ကူ လဲလှယ် Bancor ကွန်ယက်: BNT အဆိုပါ Kin နှင့်အတူဖလှယ်နိုင်ပါသည် Stellarport, ကြယ်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးချိန်း: XLM နှင့် Kin ဖလှယ်နိုင်ပါတယ် EtherDelta (ForkDelta), Mercatox, IDEX: ETH အဆိုပါ Kin နှင့်အတူဖလှယ်နိုင်ပါသည် YoBit, Mercatox: BTC အဆိုပါ Kin နှင့်အတူဖလှယ်နိုင်ပါသည် Stevenage Mieon မှတ်ချက်များ @heonbros သာသင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါလျှင်သင်မိုဘိုင်းဂိမ်းအကြားအခန်းကဏ္ဍဝေမျှနိုင်သောကောင်းသောစိတ်ကူးနှင့်တူ၏ကြည့်ရှု, ဂိမ်းထဲမှာတစ်ဦးကဂိမ်းခအတွက်မှတစ်ဆင့်ဂိမ်း developer ရဲ့ရှုထောငျ့ခဲ့ flowerbed တစ် LOCK-IN အကျိုးသက်ရောက်မှု counterproductive ပျောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျပွုပါလျှင်စီးရီးထုတ်လုပ်ရန်အဖြစ်၏သင်တန်း, အထူးဋ မှလွဲ. ထိုသို့သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဂိမ်းကိုတာဝန်ခံလည်းဝင်ငွေမှာ google ၏ပလက်ဖောင်း provider ကပန်းသီး, အရင်းအမြစ်ခဲ့သည်, သူတို့ကတစ်ဦးကြီးတွေကိုင်တွယ်လုပ်ပုံရသည်။ ငါအချို့အသေးစိတ်အစီအစဉ်နှင့်အတူကဖြေရှင်းပေးဖို့ဘယ်လိုအံ့သြတယ်။ Steemit တိုကင် Lab အဆိုပါအခန်းကြီးလက္ခဏာသက်သေအဆိုပါအကြွေစေ့ / အကြောင်းကိုထင်မြင်ချက်များဖလှယ်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်မှတ်ချက် (အခြားဆောင်းပါး / ဆောင်းပါးလင့်ခ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်) မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ 10 မှ 100% မှမဲပေးပါလိမ့်မည်။ STEEM စာရေးသူင်ငွေ 90% ကို၎င်း, SBD 85% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်, SBD 5% ကို STL မှအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ၏ 80% တစ်ဦးချင်းစီပံ့ပိုးမှုများကိုအဖြစ်ဖြန့်ဝေသည်နှင့် 20% ပူးတွဲဖြန့်ဝေနေကြသည်။ အဆိုပါအရံလာမည့်အကြွေစေ့ / လက္ခဏာသက်သေအဖြူရောင်စက္ကူအပါအဝင်, ဘာသာပြန်ချက်, များအတွက်အသုံးပြုသည်။ (Plan ကိုစက္ကူဘာသာပြန်ထားသောဆောင်းပါးများမှ Steemit နှင့်မျှဝေသူထား)
Kin kein (Kin) ko IM application ko Kick (Kik) kwinsaat palaathpaungg taithku patepaintarrseemhu ponehpyitparsai Balhaengryang: 10.000.000.000.000 Kin (10 myarrhtellmha htareleyan), htoutpanrayy: 756.097.560.976 Kin (7561 bheleyan) 9800 htautman twaeshirakyaungg tasaungg koaamayrikaandawlar 2017 mhatasangya ICO ( hkaant mhaannhkyay aarr hpyintwam 1,040 bheleyan) kyeepyinn hcaeelone nyenywhaat rayyko 3D gaim hphaan hpwoe toe t palaathpaungg, hcaeelone nyenywhaat rayy nhaint aatuulaattwal htotepyan kyaynyar aasopar gaim hcaatmhulotengaann pell pahtam usone Kin taithku gayhahcanait hpaanteehkyinn aatwat hkyaylham, pyeetot matehpaat hpyitparsai, shoetsaw sain naytone pell pw int lainn suu k aanargaat puupaunggsaungrwatmhu " mha ngway rashiaaung saungrwat inneat wainngway sonehcwal hphoet takaal aasainpyay aasineaawine myarraatwatnaryak app ko" ko shar saw hpyithkaesaininepartaal darhar raatsattapaat aanaeengaal aarainnaamyit aatwat hpya ant hkyai lainmai aasonepyusuumyarrakyarr lwhaellpyaungg kyawlwanpyee tait pe jaramein htote htarrpartaal shoetmahote lhuan syaww mhu eat tait u htaat po muurainn paitmhaat p re me yan aakyaunggaarar waalyuumhuanayhpyint Kin Kin lakhkanar saatsay lakhkanar saatsay aararaarrlone mhat saint hpaantee ninepartaal . aarainnaamyit ICO aahkamae Institutional rainnnhaeemyahuutnhaansuumyarr soneraat hkaant mhaannhkyay aarr hpyintaamayrikaan $ 50 saann pyishu raungghkyahkyinn: kanaydar hpaal htotepyee ninengantway, 168.732 ETH (aakyaunggko $ 50 saann eat raunggaarr), parwain 10 026 117 aakawngaasaitmyarreat ngwaykyay muuwardak 3000000000000 to kain: Kin hpaungdayyshinn taihtaungsuuaahpwalwain (10% aarrhpyint 10 rautkwatabhhoetaseeasee layypone taitpone tait shoutlone sot hpw ng ) aarr hkwalway .310% war gwm ganaannkwat 300 bheleyan ko hkwalway to kain laatshi payyway rayy nhainthkway 756100000000 nhaine yhain taeaahkar mhar kyeemarrtae ngwaypamarn sai layypone taitpone laeemashi 6000000000000 to kain: Kin hpaungdayyshinnmha nouthtaut sone htareleyan pout bhaw tawko hcatain taihtaungsuukatot Kin hpaungdayyshinn aahpwalwain tait u nhaint tait u rayshi aain kyae aahkyanejayarr ko mha bharsarrautaahpyit Kik mha preallocated lain mai . Kik rae 30 rarhkinenhuannko pre-hkwalway 10quartersabhhoet, layypone taitponenhuann 10 rarhkinenhuannmhar Kik hphoet sot hpw ng hkyinn nhaint hpya ant way par lain mai . kyaanshinaysayysaw hkyawwatl htareleyan pout bhawthoetsai Kin aaingyin schema hkyaee nhang, Kin gayhahcanait kyeehtwarr hkyinn nhaint aahkyayhkanaotemyitmyarr eat hcaitsainrayy raanponengway maharbyauuhar ko sone aoutmhar sot hkaat hkyinn, Kin hpaungdayyshinnmha eat kyishumhu aoutshoet hpyit lim mai . aasopar Kin Engine ko tanhaitshin nhaintahcain pinekyaanshisaw 20 rarhkinenhuann ko tait mhu nhuann mhar aahkyane kyaw payyway rayyeat 60 rarhkinenhuann ko hpya ant hkyai raan hcehcainhtarr sai hkyaee . hcaeelonenyenywatrayy developer myarrabhhoet gaim hpwanhpyaoe raan palaathpaungg payy bhhoetakyawkyarr hpyitsaw hcaeelone nyenywhaat rayy gaim aaingyin, pomyarrsaw 2017 hkunhaittwin hpya ant hkyai mobhine gaim eat htaatwaat htaat hcaeelone nyenywhaat rayy nhaint aatuu hpwanhpyaoe pyee gaim taithkuhpyittaal hpalarr hkaunggko nhainthcasaithoetko Pokemon, Kerbal aarkars aahceaahcain: tait u k gaim hcaeelone nyenywhaat rayyko aasonepyu. hpaantee gaim developer myarr harkahcarr Kindle SDKKin gaim SDK ko, sotwell hphaan hpwoe toe t kiriyar aahconesonepyee Kindle palaathpaungg gaimshoet features tway htany swinninepartaal kein rairwalhkyetko hcaeelone nyenywhaat rayy nhaintaatuu puupaungg. mobhine gaim hcyaayykwat hpampyee raanhpyitparsai sain SDK ko nhangyaabh yya shoet pwunongya aasopar SDK ko aasoparpinesinemhu Store k aarainnaamyit ko hpw int hphoet aoutparkyamtam beta ko aasang kanaydaungglote loteninepartaal, k github aatwat hpya ant hkyai raanhcehcain htokaeshoetsaw gaim shoetmahoteaasaint Up ko maharbyauuhar ko maishoet aahpyit, satainnaahkyetaalaat myahaway suu su hkya m ae hcanaittaithku tautsainhtarr mai aakyaungg, aarrnaeehkyetmyarrko satainnphoet kuunyehphoet shoetmahote hcaittamkoutyuu aasonepyusuumyarr m r shinine gaim shoetmahote sularbh hpwanhpyaoetoetaat hphoet tait aasonewainsawaakellhpyat Leave at bh sitemyarr hcateaarr htaat saanhpaungdayyshinnmha Kindle aahpyauuraunghcakkuu lelllhaal Bancor kwanyaat: BNT aasopar Kin nhaint aatuu hpalhaalnineparsai Stellarport, kyaal bahohkyaotekinemhu shothkya rayy hkyane: XLM nhaint Kin hpalhaalninepartaal EtherDelta (ForkDelta), Mercatox, IDEX: ETH aasopar Kin nhaint aatuu hpalhaalnineparsai YoBit, Mercatox: BTC aasopar Kin nhaint aatuu hpalhaalnineparsai Stevenage Mieon mhaathkyetmyarr @heonbros sar sain konepahchcaeemyarrko sone par shin sain mobhine gaimakyarr aahkaannkand waymyaha ninesaw kaunggsaw hcatekuu nhaint tuu eat kyany shu, gaim htellmhar tait u k gaim hk aatwat mhataitsaintgaim developer rae shu htawngyahkae flowerbed tait LOCK-IN aakyoesaatroutmhu counterproductive pyawwatsone hpyitpartaal . kyahanyaupyathoet s nyya pwu par shin hceeree htoteloteraanahpyiteat saintaann, aahtuut mha lwal. htoshoetsaw hpyitpartaal . daraapyin gaim ko tarwaanhkan laee wainngwaymhar google eatpalaathpaungg provider k paannsee, aarainnaamyit hkaesai, suuthoet k tait u kyeetway kinetwal lote pone rasai . ngar aahkyahoet aasayyhcate aahceaahcain nhang aatuu k hpyayshinnpayyhphoet bhaallo aan sya taal . Steemit tokain Lab aasopar aahkaannkyee lakhkanar saatsay aasoparaakyawayhcae / aakyaunggko htainmyinhkyetmyarr hpalhaal . satainnaahkyetaalaat nhaint tonepyanhkyetmhaathkyet ( aahkyarrsaunggparr / saunggparr laint hk kolaee rashinineparsai) mha ro say layyhcarrmhu nhaintaatuu 10 mha 100% mha mellpayy par lain mai . STEEM hcarrayy suuinngway 90% ko ၎inn, SBD 85% rainnnhaeemyahuutnhaanmai, SBD 5% ko STL mha aasiaamhaatpyu kyasai . rainnnhaeemyahuutnhaan ngwaypamarneat 80% tait u hkyinn hce panpoemhumyarrko aahpyit hpya ant way sainhaint 20% puutwal hpya ant way naykyasai . aasopararan larmaeetaakyawayhcae / lakhkanar saatsay aahpyauuraung hcakkuu aaparaawain, bharsarpyan hkyet, myarraatwat aasonepyu sai . (Plan ko hcakkuu bharsarpyan htarrsaw saunggparrmyarrmha Steemit nhaint myahaway suu htarr)